Akwụkwọ 8 nke ndị eze maka ụbọchị nke ndị eze. Omuma, nwa na epic | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Egwu efu, Akwụkwọ, Novela, Black akwụkwọ
Kingsbọchị Ndị Eze. Agụụ, onyinye, ọ joyụ, roscọn, auction na ndị ikpeazụ protagonists nke ekeresimesi ezumike na ọtụtụ narị akwụkwọ. Taa, m na-egosipụta ebe a 8 ndị edemede dị ka kpochapụwo dị ka oji, epic ma ọ bụ dị egwu Sophocles, Don Winslow, Ana María Matute ma ọ bụ William Shakespeare.
1 Echefuru Eze Gudú - Ana María Matute
2 Akwụkwọ nke ụbọchị eze ahụ juru - Gonzalo Torrente Ballester
4 Eze Lear - William Shakespeare
5 Ndị Eze nke Cool - Don Winslow
6 Eze nke Spades - Joyce Carol Oates
7 Arụmụka Ikpeazụ nke Ndị Eze - Joe Abercrombie
8 Eze Ikpeazụ - Michael Curtis Ford
Echefuru Eze Gudú - Ana Maria Matute
Ihe na 1996, akwukwo a aburula nke kpochapuru ebe obu na etinye ya na shelf. Ọkachamara nke Ana María Matute nwere ike ịbụ akwụkwọ ya a kacha mara amara na otu n'ime akwụkwọ ọgụgụ dị elu nke akwụkwọ ọhụụ. Adịghị m ụdị echiche efu mana mana eserese nke a Thgbọ ala ọdịbendị na-agba agba agba na akụkọ ifo juputara na ya Ahụrụ m ya n'anya. Otu onye ode akwụkwọ ahụ weere ya n’ụbọchị ya akwụkwọ ya kacha amasị ya.
Ọ bụ akụkọ banyere akụkọ ifo nke na-akọwa ọmụmụ na mmụba nke Alaeze Olar ya na ibé juputara na odide na ihe omimi. Nịm na ihe atụ Okirikiri ala nke ihe omimi ugwu na nzọụkwụ na-adịghị mma nke East na South, nke na-egbochi mgbasawanye nke Alaeze Olar, bụ ndị ọ ga-abụ isi aghụghọ nke nwa agbọghọ, anwansi nke dibia ojoo na iwu nke egwuregwu maka ihe e kere eke bi na nzuzo.
Akwụkwọ nke ụbọchị ahụ - Gonzalo Torrente Ballester
Su Mmegharị ihe nkiri Ọ ka bụ otu n'ime ihe nkiri vidio Spanish m nwere ike ịlele anya mgbe ọ bụla egosiri ya na telivishọn. Torrente Ballester bipụtara ya na 1989 ọ bụkwa egwuregwu na-ekpori ndụ nke ukwuu n’obí eze Philip nke Anọ, karịsịa mgbe ị na-ekpebi ihe ị chọrọ hu eze-nwanyị l'ẹphe. Eziokwu a na-akpata ọgba aghara n'etiti ndị ndụmọdụ ya na ndị nkwuputa ya bụ ndị na-esonyere ihe gbasara ịhụnanya eze na nnabata eze na aghụghọ nke eze. A na-edozi oke ihe niile na oke ọchị.
Eze Oedipus - Sophocles
Omuma ndi ochie nke amaghi ubochi okike. Ọ na-ewere ndị Sophocles masterpiece. Oedipus bụ eze Thebes na di Jocasta ma ọ nọkwa n'oge kachasị oge ọchịchị ya. Mgbe ọ na-enyocha ọnwụ nke eze gara aga Laius, ọ chọpụtara na nke a bụ nna ya. Na nwunye ya Jocasta bụ n'otu oge nne ya. O gburu onwe ya ma Oedipus, mgbe o kpesịrị ìsì, gwa nwanne nwanne ya Creon ka ọ hapụ ya gaa biri n'ala ọzọ.
Eze Lear - William Shakespeare
Ọdachi ọzọ na eze akụkọ ifo ọzọ dị ka Lear nke onye edemede Bekee kasị mara amara na oge niile. Edere ya n’agbata 1605 na 1606 wee mee ya n’afo 1606, ma mejuputara ya ise omume na amaokwu na prose. E bipụtara ya na 1608 ma na-adọta site na isi mmalite dịka Akụkọ Regum Brittaniae edere na 1135 site Geoffrey nke Monmouth, ọ bụ ezie na Shakespeare ji nanị ọnụ ọgụgụ eze mee ihe, ebe ọ bụ na esemokwu ahụ bụ nke mbụ ya.
En Eze Lear enwere atụmatụ abụọ yiri onwe ha: nke eze na ụmụ ya ndị nwanyị atọ, Goneril, Regan na Cordelia, na nke Earl nke Gloucester na ụmụ ya abụọ. N'okwu abụọ a, e nwere nwa aghụghọ na nne na nna tara ahụhụ nke ukwuu. Ezinụlọ naanị na-anọchi anya nrọ kachasị njọ na enweghị ntụkwasị obi na ara ga-eduga na ọdachi nke ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye a zọpụtara. Na njedebe, ka osi dị, Eze Lear na Gloucester onye ara na-enwe nwekwara ụmụ ndị hụrụ ha n'anya n'ezie, obere nkasi obi tupu ha anwụọ.
Ndị eze dị jụụ - Don Winslow
Na nke a prequel na- Anụ ọhịa, Winslow weghachite ihe odide sitere na akwụkwọ akụkọ ahụ iji wughachi ha n'oge gara aga, ma bufee anyị a California fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkọ ifo na mmalite nke ịzụ ahịa ọgwụ ọjọọ na njikọ ya na ahịa ọgwụ ndị Mexico. Ọ na-ewere ọnọdụ na 2005 na Ben, Chon na O ha na-ebi ndụ na-enweghị mgbochi na Laguna Beach ma ọ nweghị ihe doro anya ihe ha ga-eme na ndụ ha. Ya mere, Chon si na Afghanistan pụọ na mkpụrụ osisi White Widow, nsogbu mmanya, na ọ bụ naanị oge tupu ha abanye azụmaahịa na ịba wii wii. Ma nsogbu ahụ malitekwara.
Eze spades - Joyce Carol Oates
Ọgụgụ dị mkpa maka ndị edemede na etu usoro iji mepụta akwụkwọ ma ọ bụ otu akwụkwọ ahụ nwere ike kewaa gị abụọ. Ọhụụ ọhụụ nke ọnụ ọgụgụ Dr. Jekyll na Maazị Hyde etinyere onye edemede nwere ezigbo ọrụ na ezinụlọ zuru oke nke na-ede akwụkwọ akụkọ na-aga nke ọma site na ụbọchị wee bụrụ Eze nke Spades, pseudonym nke oji ede udiri akwukwo ndi ozo di egwu ma dikwa egwu. Ihe na-akpata mgbanwe a ga-abụ ọkpụkpọ oku ọ na-enweta otu ụbọchị yana a ebubo ebubo imebi iwu site n'aka onye agbata obi ya.
Ikpeazụ arụmụka nke ndị eze - Joe Abercrombie
Onye ode akwukwo Britain a bu aha kariri ndi anakpo aha na aha efu na aha a emechi ya trilogy nke Iwu mbụ. Tonic nke onye dere akwukwo gara n’ihu, onye okacha amara n’eme ka anyi mata ndi ufodu a maara nke ọma na ihe ochie (onye amamihe maara ihe, nwa okorobịa ahụ, onye ngwụrọ obi ọjọọ…). Ma mgbe ahụ ọ na-akụziri anyị na ọ dịghị onye dị ka ọ dị ka ọ bụ.
Na njedebe a eze Ugwu-ịnyịnya nọdu l'aba-eze iya ma ọ bụ naanị otu onye agha nwere ike ịkwụsị ya: Onye Ọbara. N'aka nke ọzọ Union King anwụọla, ndị ọrụ ala ahụ na-enupụ isi na ndị a ma ama na-alụ ọgụ maka okpueze ha. Naanị onye mbụ n'ime ndị Magi nwere atụmatụ ịchekwa ụwa, mana oge a enwere ihe egwu. Ihe kachasị njọ bụ imebi Iwu nke Mbụ.
Ikpeazụ eze - Michael Curtis Ford
Otu akụkọ ihe mere eme iji gwụ. American Curtis Ford bụ onye nkuzi Latin, onye ntụgharị okwu na onye edemede. Ọrụ ya metụtara Gris na Rom oge ochie. Na nke a ọ na-agwa anyị akụkọ banyere Mitríades, nwatakịrị nwoke na-eme nke ọma n'igosipụta ikike agha ya na onye chọrọ ime ka Alaeze Gris oge ochie dị n'otu. Ghọrọ Mithriades nke Isii, eze Pọntọs, na afọ iri anọ ọ lụrụ ọtụtụ agha mana o nwekwara onye ike ya nwere ike. Ọchịchọ gị ịgbaso nzọụkwụ nke Alexander Onye Ukwu ha duuru ya gakwuru a ogwugwu di egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Akwụkwọ 8 nke ndị eze maka ụbọchị nke ndị eze. Omuma, nwa na epic
Sue Grafton si Orphan Z